Tababar ku saabsan Habka Maareynta Iibka oo lagu qabtay Garoowe(Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
Tababar ku saabsan Habka Maareynta Iibka oo lagu qabtay Garoowe(Sawirro)
August 16, 2021	in Warka
GAROWE – Xisaabiyaha Guud ee Dowladda Puntland Mudane Cumar Saalax Aadan ayaa maanta magaalada Garoowe ka daahfuray tababar ku saabsan habka iibsashada iyo lacag bixinta oo muddo laba cisho ah ka socon doona Garoowe.
Kulankan waxaa ka soo qayb galay Xiriiyaha Mashruuca PFM, Agaasimaha waxaada Tababarada iyo mas’uuliyiin kale.
Mudane Cumar Saalax Aasan oo ugu horrayn ka hadlay furitaanka tababarka ayaa u mahadceliyey mashruuca PFM oo soo agaasimey tababarkan lagu baranayo hannaanka iibsiga iyo lacag bixinta Puntland.
Xisaabiyaha ayaa sheegay in tababarkani uu ku aadan yahay sidii loogu guuri lahaa hannaan casri ah isla markaana loo casriyeyn lahaa habsami u socodka shaqada wasaaradda.
“…..Tababarkaani waa hannaan wax iibsi oo aannu ku soo kordhinay habkii hore, systemku wuxuu lee yahay qaybo badan waana lasii horumariyey, (Purchasing Module & Commitment Control) “, ayuu yiri Xisaabiyaha Guud Dowladda Puntland.
Ugu dambayntiina, Xisaabiyaha ayaa sheegay inay Wasaaradda ka go’antahay sidii loogu wareegi lahaa shaqo cilmi ku dhisan si kor loogu qaadi lahaa Daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka, loona hagaajin lahaa adeegga dadweynaha.
Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland iyo Shirkadda Isxilqaan oo heshiis kala saxiixday(Sawirro)
Shir looga hadlay kor u qaadista shaqo wanaaga Hanti-dhowrka Gudaha oo lagu qabtay Garowe(Sawirro)